UMasipala usengcupheni yokuguqa – Ubukhosi
Home/ Umkhandlu/UMasipala usengcupheni yokuguqa
I-Alfred Duma kuthiwa isiphenduke isinxibi isihamba ikhongozela komasingcwabisane nakomashonisa
KUTHIWA sekubonwa ngokusa kuMasipala i-Alfred Duma obuwaziwa ngokuthi uMnambithi njengoba usuboleka imali komashonisa ngenxa yenhlupheko, nosekuze kwathathwa isinqumo sokuba amakhansela aphucwe abaqaphi.
Enye yezinkampani okuthiwa kubolekwa kuyo imali, idume ngokuba umasingcwabisane ongaconsi phansi kubantu baseMnambithi.
Igama layo nezinye ezimbili ezilekelelayo agodliwe yileli phephandaba kanti phambilini yizo okuvela ukuthi bezihlomula kakhulu ngamathenda.
IBAYEDE ihabule ukuthi isimo sinzima ngale ndlela yokuthi sekutshelwe nabasebenzi ukuthi izikhala ezidinga ukuvalwa, sezizoyekwa zinjalo ngoba ayikho imali yokuholela abazongena kuzo.
Okunye okuvelayo ukuthi ngisho izimoto zoMkhandlu sekunamagaraji ezingasavunyelwe ukwetha kuwo ngoba uMasipala uyehluleka ukukhokha.
Usizi lwalo Masipala alugcini lapho kodwa kuthiwa Oklebe bangena bephuma kuwo njengoba ezinsukwini ezedlule kuthiwa bafike ebhilidini elikhulu lo Mkhandlu bashaqa amalaptop namakhompyutha.
“Sibhekene nenkinga ngoba amakhansela abenabaqaphi abhalelwe izincwadi etshelwa ukuthi uMasipala usuyabahoxisa ngoba awukwazi ukukhokhela izinkampani zabo. Okunye ukuthi nathi singabasebenzi sicishe sangahola ngoZibandlela ngoba sabikelwa ukuthi uMasipala ususele nemali yenyanga eyodwa ukuba sikwazi ukuholelwa. Kubi nje impela kakhulu ngoba sekukhona nokukhathazeka mayelana nokuthi ngabe uma kuphela le nyanga sizokwazi yini ukuhola. Kusuka nje ekuqaleni konyaka sasibona sekusile ngosuku lokuhola ukuthi imali ingenile ngoba besilala singazi ukuthi sizoyithola yini. Okusiphethe kabi ukuthi nakuba sibhekene nalesi simo kodwa iMeya ishaya ngebutho labaqaphi futhi isifake isicelo sokuthengelwa imoto entsha benoSomlomo. Empeleni uSomlomo eyakhe isifikile iBMW x5 kanti inani layo lingaphezulu kwesigidi. Okusixakayo ukuthi lezi zimoto abazifunayo zithengwa kanjani ekubeni sesitshelwe ukuthi uMkhandlu awusenamali,” kusho omunye wabasebenzi obekhathazekile.
Lo Masipala ubhekene nalesi simo nje kuthe ekuqaleni kwalo nyaka uMcwaningimabhuku Jikelele, uMnu uKimi Makwetu wamemezela ukuthi uhlulekile ukuletha umbiko wawo njengabo bonke oMasipala baseNingizimu Afrika.
Lesi simemezelo sibuye sakhishwa uMphathiswa uNkk uNomusa MaDube Ncube ngesikhathi ededela umbiko kaMakwetu obuchaza ngesimo soMasipala.
Ngaphandle kwalokho eminye imithombo ekhulume nelaboHlanga ebicela ukuba ingadalulwa ngenxa yokusabela ukubulawa, ithe izinto zimapeketwane kakhulu kulo Masipala.
“Uyabona izinto zimbi ngale ndlela exakile e-Alfred Duma ngoba ngikhuluma nje asazi ukuthi izidingo zizohanjiswa kanjani emphakathini uma imali sekuthiwa ayikho. Kula masonto edlule bekunemibhikisho yabantu abebekhala ngezidingo ezifana nemigwaqo osekunesikhathi yathenjiswa kodwa ayikaze yakhiwe. Okunye ukuthi la makhansela agcwele khona awanandaba nabantu kodwa abeka phambili ukubukwa. Kuleli sonto esiphuma kulo, ngoMgqibelo besinombuthano wamakhansela asoThukela eDrakensburg. Sasizolala ubusuku obubodwa bese sibuyela emakhaya. Okwenzekile amakhansela ase-Alfred Duma afika wonke ehamba nabaqaphi bawo ababalelwa kwabangama-20.
Labo baqaphi abazange babuyele emuva kodwa nabo babekhokhelwe izindlu zokulala. Uyacabanga ukuthi ingakanani imali eyaphuma lapho kukhokhelwa la makhansela nabaqaphi bawo? Uyazi mina ngafika nowami umqaphi kodwa ngoba ngangibona ukuthi kuseduze eMnambithi ekhaya ngathi onogada ababuyele emuva bangilande ngakusasa ngeSonto nokuyinto ozakwethu laba ababengayenza. Okunye amakhansela ayinkinga awesilisa ngoba ayakuthanda ukubukwa. Yiwo lawa anabaqaphi abaningi ngoba lawa esifazane awahluphi kangako ngokugadwa. Lokhu kwenza ngizibuze ukuthi njengoba kumnandi kangaka ukuzihambela wedwa ngemoto yakho yini lena eyenza bathande onogada kangaka,” kusho omunye wabaholi othintiwe ukuze achaze kabanzi ngesimo esiqhubeka e-Alfred Duma.
Lo mholi uthe inkinga enkulu edala lo Masipala ukuba uguqe ngamadolo ukuthi amakhansela nabasebenzi abayizikhulu bakhohlakele kakhulu. Udalule ukuthi sekuze kwabanombono wokuthi kuqalwe uhlelo lokuphenya izinga le mpilo yabasebenzi namakhansela ukuthi liyalingana yini nemiholo yabo.
“Laba bantu ababhekele izindaba zamathenda bahlangene namakhansela bese kukhishwa budedengu amathenda. Akugcini lapho kuqashwa abantu ngisho sekubonakala ukuthi umthamo wabo usungaphezulu kwesabelomali sonyaka. Yingakho ke kunje,” kusho lo mholi.
Oklebe bathunyelelwe imibuzo ukuze baphawule ngokugasela kwabo e-Alfred Duma kodwa kuze kwashaya isikhathi sokushicilela bengaphenduli.
IMeya yase-Alfred Duma, uMnu uVincent Madlala ikuqinisekisile ukuthi sebethathe isinqumo sokuba baphuce amakhansela abaqaphi ngoba kungaphezulu kwamandla abo.
“Sinenkinga yokuthi uMasipala wethu unamakhansela angaphezulu kwali-15 manje osuthola ukuthi ayagadwa. Wonke lamakhansela afika nemiyalezo yokuthi ayesatshiswa ngakho awakwazi ukusebenza engaqashiwe ukuze aphephe. Siyavuma ukuthi lokhu abakushoyo kuyinkinga ngoba uMnambithi uyaziwa ukuthi unesimo esingesihle uma kuziwa kwezokuphepha. Nakuba kunjalo kodwa sibathathile abaqaphi sakhipha nezinkampani ebezisihlinzeka ngabo ukuze sizame ukonga imali. Esesikwenzile manje ukuthi sitshele bonke abantu ukuthi uma kukhona umuntu okhala ngokusatshiswa nodinga abaqaphi, kuyomele athumele udaba lwakhe emaphoyiseni ukuze acwaninge ubungozi abhekene nabo ngaphambi kokuba anikezwe abaqaphi.
Okunye engithanda ukukusho ukuthi uma kukhulunywa ngokuthi imali asinayo, sikhulumela ekutheni imali esinayo ingasigcina izinyanga ezintathu kodwa okungasho ukuthi asisakwazi ukusebenza. Kulolu daba lwami, mina nginabaqaphi ababili boMkhandlu okumanje nginabo lapha eGoli. Laba abanye ababili benkampani ezimele ngibasebenzisa uma ngiseMnambithi ngoba akuphephile kuleya ndawo wonke umuntu uyayazi. Mayelana nokuboleka komashonisa mina bengingakwazi lokho kodwa ngizoke ngibuze kahle ababheleke ezezimali ngaphakathi kuMasipala,” kusho uMadlala.
Mayelana nokuthengwa kwezimoto uthe bekuphoqelekile ukuthi bathole ezinye benoSomlomo ngoba abacwaningi bezokuphepha bakhiphe umyalelo wokuthi lezi abahamba ngazo azisekho esimeni esihle. Uqhube wathi akakazi ukuthi hlobo luni lwemoto azothengelwa lona kanti nekaSomlomo akakayiboni. Uthinte nodaba loKlebe wathi uzwile ngabo ukuthi baphuma bengena oThukela kodwa akazi noma basuke beze kuMasipala wakhe noma kwabanye abangaphansi koThukela.
Uthe konke lokhu uzokuzwa kahle uma esebuyela eMnambithi namhlanje ngoLwesihlanu ntambama.
UMnu uXolani Makhubo weMakhubo Funeral Services okuthiwa iboleka uMasipala imali, uthe banabo ubudlelwano nalo Masipala kodwa abakaze bawusize ngezimali.
“Ubudlelwano esinabo obokubasiza ukuba sibangcwabele abantu abasuke bengenabani kuphela futhi bayasikhokhela ngalowo msebenzi,” kusho uMakhubo.
Sekuphele iminyaka engaphezu kweshumi belinde umxhaso